Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Pompeo ayaa la kulmay dowladda Afghanistan – AfmoNews
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Pompeo ayaa la kulmay dowladda Afghanistan
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Sabtidii magaalada Doha kula kulmay gorgortamayaasha ka socda dowladda Afghanistan iyo Taalibaan, iyadoo ay muuqato ifafaalo hormar leh oo ku saabsan wadahadalladooda iyadoo Washington ay dardar gelineyso ka bixitaankeeda.
Booqashada Pompeo waxay imaaneysaa kadib weerar gantaalo lagu hoobtay oo ku dhacay goobaha dadku ku badan yihiin ee Kabul waxaana ku dhintey ugu yaraan sideed qof rabshadihii ugu danbeeyey ee ka dhacay caasimada Afghanistan.
Taalibaan ayaa beenisay masuuliyada waxaana dowlada islaamiga ah sheegatay weerarka lagu hoobtay.
Pompeo ayaa si gooni gooni ah ula kulmay dowlada Afqaanistaan ​​iyo kooxda wadaxaajoodka Taalibaan hoteel qaali ah oo ku yaal caasimada Qatar.
“Waxaan aad u xiiseyn lahaa inaan helo fikirkaaga ku saabsan sida aan u kordhin karno suurtagalnimada natiijo guuleysata,” ayuu yiri Pompeo markii uu la kulmay dowladda Afghanistan, isagoo xusay inay wadaagaan xiisaha xaaladdan oo kale.
Wuxuu sidoo kale la kulmay saldanada Qadar Amiir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani iyo Wasiirka Arimaha Dibada Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani iyagoo joogsaday magaalada Doha, xarunta Taliban ee diblomaasiyada.
Diblumaasiga ugu sareeya ee is casilay ayaa ku guda jira socdaal toddobo dal ah oo uu ku marayo Yurub iyo Bariga Dhexe iyada oo madaxweyne Donald Trump uu xirayo mudnaanta dambe.
Horraantii toddobaadkan, Pentagon-ku wuxuu sheegay inuu si dhakhso leh ugala bixi doono Afghanistan ilaa 2000 oo askari, taasoo soo dedejinaysa xilligii loogu talagalay heshiiskii Febraayo ee u dhexeeyay Washington iyo Taliban oo saadaaliyay bixitaanka buuxda ee Mareykanka illaa bartamaha 2021.
Trump wuxuu si isdaba joog ah u ballanqaaday inuu soo afjarayo “dagaal weligiis ah,” oo ay ku jiraan Afgaanistaan, dagaalkii ugu dheeraa ee abid abid ka dhaca Mareykanka, kaas oo ku billowday duulaan lagu celinayo Taliban ka dib weeraradii Sebtember 11, 2001.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden, heshiis dhif ah oo lala galay Trump, wuxuu kaloo u ololeeyaa in la soo afjaro dagaalka Afgaanistaan, in kasta oo falanqeeyayaashu rumeysan yihiin in uusan noqon doonin sida uu qabo xaas ka bixitaan deg deg ah.
Kooxda Taliban ayaa markii ugu horeysay la hadlaysa dowlada Afghanistan.
Wadahadalladu waxay ka billowdeen Sebtember 12 magaalada Doha laakiin durba waxay ruxeen is afgaranwaaga ku saabsan ajandaha, qaabka aasaasiga ah ee doodaha iyo tarjumaadda diinta.
Ilo dhowr ah ayaa Jimcihii u sheegay AFP in labada dhinacba ay u muuqdaan inay xalliyeen dhibaatooyinka qaar, si kastaba ha ahaatee.
Qodobada ilaa iyo hada la cayimay, Taliban iyo dowlada Afghanistan waxay ku dhibtoodeen inay isku afgartaan luuqad guud oo labo arimood muhiim ah.
Taalibaan, oo ah Sunniyiin mayal adag, waxay ku adkeysanayaan inay raacaan dugsiga Xanafi ee fiqiga islaamka Sunniyiinta, laakiin gorgortamayaasha dowladda ayaa sheegaya in tan loo adeegsan karo in lagu takooro dadka Hazaras, oo u badan muslimiinta shiicada ah, iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay.
Arrinta kale ee muranka badan dhalisay ayaa ah sida heshiiska Mareykanka iyo Taliban uu u qaabeyn doono heshiis nabadeed Afgaanistaan ​​mustaqbalka iyo sida loo tixraaci doono.
Wadahadalka nabada ee Doha ayaa furmay kadib markii Taliban iyo Washington ay saxiixeen heshiis bishii Febraayo, kaas oo Mareykanku ogolaaday in laga saaro dhamaan ciidamada shisheeye iyadoo lagu badalayo dammaanad qaad dhanka amaanka ah iyo balan qaad Taliban ay ku furayso wadahadalo.
Rabshadaha ayaa sii kordhaya
In kasta oo wadahadaladu socdeen, rabshadaha ayaa kusii kordhay guud ahaan Afghanistan, iyada oo Taalibaan ay sii xoojinayaan weerarada maalinlaha ah ee lala beegsanayo ciidamada amniga Afghanistan.
Qorshaha Trump ee lagu yareynayo ciidamada ugu dambeyn 15-ka Janaayo – wax ka yar hal usbuuc ka hor inta aan la dhaarinin dhaxal sugaha Joe Biden – ayaa waxaa dhaleeceeyay dadka degan magaalada Kabul, oo ka baqaya inay ku dhiiri galin doonto Daalibaan inay soo saaraan mowjado cusub oo dagaal ah.
Dadka rayidka ah ee reer Afqaanistaan ​​ayaa muddo dheer qaadayay dhibaatada ugu badan ee dhiig daadinta dalka.
Saraakiisha Kabul ayaa sidoo kale ka walwalsan inay xoojiso mowqifka Taalibaan ee miiska wadahadalka, halkaasoo mustaqbalka guulaha adag ee ay ka mid yihiin xuquuqda haweenka ay ku jiraan.
Gantaalkii Sabtida ee ka dhanka ahaa caasimada Afghanistan ayaa arkay gantaalo fara badan oo ku milmaya qeybaha kala duwan ee bartamaha iyo waqooyiga Kabul – oo ay ku jiraan gudaha iyo hareeraha Aaga Cagaaran ee aadka loo ilaaliyo ee ay degan yihiin safaaradaha iyo shirkadaha caalamiga ah.
Kooxda la baxday Dowladda Islaamka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 28 gantaal oo loo yaqaan “Katyusha” ay soo rideen “askarta khilaafada”.
Afayeenka wasaarada arimaha gudaha Afghanistan Tariq Arian ayaa horey ugu eedeeyay kooxda Taliban wuxuuna yiri “argagixisada” waxay soo rideen wadar ahaan 23 gantaal. Taalibaan, si kastaba ha ahaatee, way beeniyeen mas’uuliyadda, waxayna yiraahdeen “si indho la’aan ah ugama toogtaan goobaha dadweynaha”.
Safaaradda Iiraan ayaa ku sheegtay barta ay ku leedahay Twitter-ka in dhismaheeda ugu weyn ay ku dhacday burburka gantaallo ka dib markii ay soo dhacday goobtii diyaaradda. Cidina kuma dhaawacmin ururka, oo ku yaal meel ka baxsan aagga cagaaran.
Weerarradii ugu dambeeyay ee ka dhacay Kabul, oo ay ku jiraan laba xadgudubyo argagax leh oo lala beegsaday xarumo waxbarasho oo ay ku dhinteen ku dhowaad 50 qof toddobaadyadii la soo dhaafay, waxay la socdaan qaab caan ah wixii ka dambeeyay, iyada oo Daalibaan ay diidayaan wax lug ah halka dowladda Afghanistan ay ku eedeyneyso iyaga ama wakiilladooda.